आजदेखि उत्तरायण आरम्भ , केहो उत्तरायण ? - Birgunj Sanjalआजदेखि उत्तरायण आरम्भ , केहो उत्तरायण ? - Birgunj Sanjalआजदेखि उत्तरायण आरम्भ , केहो उत्तरायण ? - Birgunj Sanjal
आजदेखि उत्तरायण आरम्भ , केहो उत्तरायण ?
१ माघ २०७६, बुधबार १०:०६
विरगंज | वर्षदिनमा दुईपटक सुर्यको स्थितिमा परिवर्तन हुने गरेको छ। ति दुई परिवर्तनलाई “उत्तरायण र दक्षिणायन” भनेर बुझिन्छ। ६ -६ महिनाको अवधिमा सुर्यले मकर राशि देखि मिथुन राशिसम्म गोचर गर्दा त्यस समयलाई उत्तरायण भनिन्छ भने जब सुर्य कर्कट राशी देखि धनु राशिसम्म प्रवेश गर्दछ त्यो समयलाई दक्षिणायन भन्ने गरिन्छ।